Frank Leboeuf oo Zidane u filaya noqoshada macalinka xiga ee xulka Qaranka Faransiiska. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Frank Leboeuf oo Zidane u filaya noqoshada macalinka xiga ee xulka Qaranka Faransiiska.
Frank Leboeuf oo Zidane u filaya noqoshada macalinka xiga ee xulka Qaranka Faransiiska.
Posted by: radio himilo May 24, 2017
Muqdisho – Laacibkii hore ee Faransa, Frank Leboeuf ayaa filaya in macalinka Real Madrid iyo muwaadinka dalkiisa, Zinadine Zidane guntii lagu badali doono booska macalin Didier Deschamps oo hadda xulka leyliya.
Zidane oo markii ugu horreysay shaqadiisa Madrid kula guuleystay horyaalka Spain – La Liga, kaas oo dhawaan filaya inuu markii labaad oo xiriir ah ku guuleysto koobka Champion League ayaa saameyn ifafaalo leh ku yeeshay suuqyada qaaradda Yurub. Wuxuuna xilka Madrid kala wareegay macalin Rafael Benitez sanadkii 2016.
“Ma aqaan goorta macalin Didier Deschamps uu go’aansan doono tegistiisa ama guddiga kubadda cagta Faransiiska ay xilka ka qaadi doonaan, hayeeshe dhamaanteen waxaan dareensannahay in Zidane uu noqon doono macalinka xiga ee xulka Qaranka Faransiiska,” ayuu yiri Leboeuf kaas oo Zidane kula guuleystay koobkii adduunka 1998 iyo Euro 200.
“Taasina waa khiyaarkiisa haddii uu rabo rabo. Waayo hadduu go’aansado inuu kusii nagaado Real Madrid, ma buuxin doono jaqadan xattaa haddii ay banaan tahay.”
“Way adag tahay in waqti badan lasii noqdo macalin Real Madrid leyliya. Mr Perez ma dul-qaad badna. Markay suura-gal noqoto, Zidane wuu ku biiri doono xulka Qaranka.”
Isaga oo sii wada amaanta 44-jirkan, Leboeuf wuxuu intaas kusii daray: “Waxay u muuqataa in wax kasta oo Zinedine Zidane uu taabto ay dahab noqonayaan.”
“Ku qaadashada waayo badan gudaha Real Madrid, waxay siisay waaya’aragnimo xoogan oo u fududeysay inuu ku guuleysto koobka Champion League in yar kadib magacaabistiisa.”
“Hayeeshe waxay ila tahay in howlihii uu kasoo dhinac qabtay macalin Ancelotti iyo akadeemiyada tababarka kooxda inay qeyb weyn ka qaadatay waaya’aragnimada uu ku suura-galiyay shaqo-gelinta kooxda.”
Previous: Sam Allardyce oo xaqiijiyay inuu ka fariisanayo macalinnimada kubadda cagta.
Next: Faadumo Soon-qaad – Bil Shacbaan?!